4 O wee ruo na, ozugbo Sanbalat+ nụrụ na anyị na-ewughachi mgbidi ahụ, iwe+ were ya, ọnụma jukwara ya obi, o wee na-akwa ndị Juu emo.+
2 O wee malite ikwu n’ihu ụmụnne+ ya na ìgwè ndị agha Sameria, ee, ọ malitere ikwu, sị: “Gịnị ka ndị Juu a na-enweghị ume na-eme? Hà ga-arụ ihe a n’onwe ha? Hà ga-achụ àjà?+ Hà ga-ewucha ya n’otu ụbọchị? Hà ga-esi ná mkpọmkpọ ihe+ a wepụtasịa nkume dị mma, ebe ọ bụ na a gbaala ha ọkụ?”
3 Tobaya+ onye Amọn+ nọkwa ya n’akụkụ, o wee sị: “Ọbụna ihe a ha na-ewu, ọ bụrụ na nkịta ọhịa+ amagoro ya, ọ ghaghị ịkwatu mgbidi ya e ji nkume wuo.”
4 Chineke anyị, biko, nụrụ,+ n’ihi na anyị aghọwo ndị a na-elelị;+ mee ka ha jiri isi ha buru nkọcha+ ha, meekwa ka e meso ha dị ka ihe a kwatara n’agha, ka ha ghọọkwa ndị a dọọrọ n’agha laa n’ala ọzọ.
5 Ekpuchikwala njehie+ ha na mmehie ha n’ihu gị. Ka a ghara ihichapụ ya ehichapụ, n’ihi na ha emewo ndị na-ewu mgbidi a ihe ọjọọ.
6 Anyị wee na-ewu mgbidi ahụ, e wee jikọta mgbidi ahụ dum ọnụ ruo ọkara ịdị elu ya, ndị anyị nọkwa na-enwe obi ịrụ ọrụ.+
7 O wee ruo na, ozugbo Sanbalat+ na Tobaya+ na ndị Arebia+ na ndị Amọn+ na ndị Ashdọd+ nụrụ na ọrụ ịrụzi mgbidi Jeruselem agawo n’ihu, n’ihi na a malitewo imechi oghere ndị dị na ya, oké iwe were ha.
8 Ha niile wee malite ịgba izu+ ịbịa buso Jeruselem agha wee kpatara m nsogbu.
9 Ma anyị kpekuru Chineke anyị ekpere+ ma debe ndị nche ka ha na-eche nche ehihie na abalị n’ihi ha.
10 Juda wee malite ịsị: “Ike agwụwo onye na-ebu+ ibu arọ, ma e nwere mkpọmkpọ ihe+ dị ukwuu; anyị onwe anyị enweghịkwa ike ịga n’ihu iwu mgbidi a.”
11 Ndị na-emegide anyị nọkwa na-asị: “Ha agaghị ama,+ ha agaghịkwa ahụ anyị ruo mgbe anyị batara n’etiti ha, anyị ga-egbukwa ha wee kwụsị ọrụ ahụ.”
12 O wee ruo na, mgbe ọ bụla ndị Juu bi ha nso batara, ha na-agwa anyị ugboro iri, sị: “Ha ga-esi n’ebe niile anyị bi gbagote, ya bụ, n’ebe unu ga-alọghachi.”
13 M wee debe ndị ikom n’ebe dị iche iche kasị ala n’azụ mgbidi ahụ, n’ebe sara mbara, m wee debe ndị mmadụ n’ebe ahụ, n’ezinụlọ n’ezinụlọ, ha ji mma agha ha,+ ube ha+ na ụta ha.
14 Mgbe m hụrụ na ha na-atụ egwu, m biliri ozugbo gwa ndị a ma ama+ na ndị osote onye na-achị achị+ na ndị ọzọ, sị: “Unu atụla egwu+ n’ihi ha. Chetanụ Jehova bụ́ Onye dị ukwuu+ na Onye dị egwu;+ buoronụ ụmụnne+ unu agha, tinyere ụmụ unu ndị ikom na ụmụ unu ndị inyom, ndị nwunye unu na ebe obibi unu.”
15 O wee ruo na ozugbo ndị iro anyị nụrụ na anyị amatawo ihe ha na-eme, na ezi Chineke emebiwo atụmatụ+ ha, na anyị niile agaghachiwokwa na mgbidi ahụ, onye ọ bụla n’ihu ọrụ ya,
16 ee, o wee ruo na malite n’ụbọchị ahụ gaa n’ihu, ọkara n’ime ụmụ okorobịa+ m nọ na-arụsi ọrụ ike n’ọrụ ahụ, ọkara ha ejiri ube, ọta na ụta, yirikwa uwe agha;+ ndị isi+ nọkwa na-akwado ụlọ Juda dum.
17 Onye ọ bụla n’ime ndị na-ewu mgbidi ahụ na ndị ọrụ bụ́ ndị na-ebu ibu dị arọ ji otu aka na-arụsi ọrụ ike ma jiri aka+ nke ọzọ jide ngwá agha.+
18 Onye ọ bụla n’ime ndị na-ewu mgbidi ahụ kekwara mma agha n’úkwù,+ ka ha nọ n’ọrụ;+ onye ga-afụ opi+ nọkwa m n’akụkụ.
19 M wee gwa ndị a ma ama na ndị osote onye na-achị achị+ na ndị ọzọ, sị: “Ọrụ a ga-arụ buru ibu, dịkwa ukwuu, anyị gbasakwara n’elu mgbidi a, nọrọkwa ibe anyị n’ebe dị anya.
20 N’ebe unu nụrụ ụda opi, n’ebe ahụ anyị nọ ka unu ga-ezukọta. Chineke anyị ga-eburu anyị agha.”+
21 Ka anyị nọ na-arụ ọrụ ahụ, ọkara nke ọzọ ji ube, malite mgbe chi bọrọ ruo mgbe kpakpando pụtara.
22 N’oge ahụkwa, m gwara ndị ọrụ ahụ, sị: “Ka ndị ikom ahụ nọbọọ chi na Jeruselem,+ onye nke ọ bụla na onye na-ejere ya ozi, ha ga-abụkwara anyị ndị nche n’abalị na ndị ọrụ n’ehihie.”
23 Mụ+ na ụmụnne+ m na ndị na-ejere m ozi+ na ndị na-eche nche,+ bụ́ ndị nọ m n’azụ, eyipụghị uwe anyị, onye nke ọ bụla ji ngwá agha+ ya n’aka nri.
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D16%26Chapter%3D4%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl